ဂျပန်လူမျိုး တွေ တောင် လက်ဖျား ခါလောက် အောင် ချီးကျူး ရတဲ့ ရွှေ မြန်မာ တို့ရဲ့ အိုင် ကျူ မြင့်မား ပုံများ – Shwewiki.com
ဂျပန်လူမျိုး တွေ တောင် လက်ဖျား ခါလောက် အောင် ချီးကျူး ရတဲ့ ရွှေ မြန်မာ တို့ရဲ့ အိုင် ကျူ မြင့်မား ပုံများ
ဂျပန်နိင်ငံ တိုကျိုမြို.ရဲ့ JICAcenter ကအခန်း တွေမှာ မီး မလောင် ရအောင် အခန်းထဲမှာ smoke sensor တပ်ထား ပါ တယ်။ အခန်း ထဲ မှာ ဆေးလိပ် သောက်ရင် sensor ကအသံမြည်ပါတယ်။ အနံ့ ဆက်ရှိ နေမယ် ဆိုရင် အမိုးကနေရေတွေပန်းထွက်လာပါတယ်။ အခန်းမီးကိုလဲ ပါဝါနည်းတဲ့ breaker တပ် ထားပါတယ်။ အခန်း ထဲမှာ ထမင်းဟင်းချက် လို့မရအောင်ပါ။ breaker ကိုလဲ ဖြုတ်လို.မရ အောင်၊ ဖြုတ်ရင်လဲ သိအောင်ရက်ဆွဲ ရေးထားတဲ့ cellotape ကပ် ထားပါတယ်။ အဲ့ဒါကို အနံပြင်းတဲ့ မြန်မာဟင်းတွေ ရအောင် ချက် စားကြတယ်။ အိမ်သာထဲမှာ exhaut fan ရှိတာမို့ ကမုတ်ပေါ်မှာ တင်ချက်ကြပါတယ်။ မြန်မာ အင်္ဂျင်နီယာတွေက cellotape ပေါ်ကစာမပျက်အောင် breaker ပြောင်းတပ်ပေးပါ တယ်။
အခန်းကို နေ့တိုင်း သန့်ရှင်းရေး လာ လုပ်လို့ ချက်စားတဲ့ ဆန် စတာတွေကို ရန်ကုန်က ပါလာတဲ့ သေတ္တာထဲမှာထဲ့ သိမ်းပြီးသော့ ခတ်ထား ရတယ်။ အခန်း ထဲမှာလဲ ကျ မနေအောင် သတိထား သိမ်းပြီးမှ အလုပ်သွားရတယ်။ အဲ့ဒီတုံးက စဉ်းစားမိတာက ငါဘာ အကုသိုလ်များလုပ်ခဲ့လို့ ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ ကိုယ်ဘာလို့ ခိုးချောင်ခိုးဝှက်စား နေရတာလဲလို့ အခုမှအဖြေတွေ့တယ်။ ဘာ အကုသိုလ်ကြောင့်မှ မဟုတ်ဘူး။ ပိုက်ဆံမက်တဲ့ လောဘနဲ့ ကိုယ့်မြန်မာစာနဲ့ မြန်မာ မိတ်ဆွေတွေကိုမက်တဲ့ လောဘကြောင့်ပဲ။
တစ်ကြိမ် မှာတော့ ရန်ကုန်က ရောက်စ မြန်မာ ပညာ သင်နှစ်ဦး အခန်း ထဲမှာ ရန်ကုန်က ပါလာတဲ့ အမဲသား ခြောက်တွေချက်တာ အမိုးကရေတွေလဲ ပန်းထွက်၊ အသံတွေလဲမြည်တာနဲ့ ဟင်းအိုးကိုင်ပြီး corridor ကိုထွက်လာတယ်။ corridor ကို security က camera တွေနဲ့အမြဲကြည့်နေတာ။ သူတို့ဟင်းအိုးရော rice cooker ရော်သိမ်းသွားပြီး ရန်ကုန် ပြန်မှပြန်ပေးတယ်။
ဂျပန်မှာ စက်နဲ့ လောင်းကစားတဲ့ (ပါချင်ကို)ဆိုတာ နေရာတိုင်း လိုလိုမှာ ရှိတယ်။ ဂျပန်တွေ က တကမ္ဘာလုံး ကို သူတို့စေတနာ ၊မေတ္တာ ရှိတယ်ဆိုတဲ့ နံမည်ကောင်း ပြချင် တယ်။ ဒါကြောင့် JICA အထောက်အပံ့တွေ နိုင်ငံ တော်တော် များများကို ပေးတယ်။ ဒါပေမဲ့သူများနိုင်ငံတွေကို တော့သူတို့ ရဲ့နည်းပညာတွေမရစေချင်ဘူး။ သင်တန်း မှာ ဘာမှသိပ်မသင်ဘူး။ (Intensive care က လာတဲ့သူနာပြုဆရာမလေးက ပြောတယ် ကျမတော့ ရန်ကုန်ရောက်ရင် ဘာသာပြန်တဲ့အလုပ်ဘဲ ပြောင်းလုပ်ရမယ်ထင်တယ်တဲ့။ ကျမတို့ဓါတ်ခွဲခန်းမှာလဲ Reagents အားလုံးဂျပန်လိုရေးထာတာ။ Distilled water နဲ့. Acetic acid ဆို အနံ့နံနံကြည့်ရတယ်)။ သူတို့ထောက်ပံ့တဲ့ပိုက်ဆံသူတို့ တိုင်းပြည်မှာ ပဲသုံးပြီးပြန်စေချင်တယ်။
ပညာတော်သင် တစ်ယောက် က ဘာမှသင်စရာ မရှိတော့ လောင်းကစား တဲ့ စက်နဲ့ နေ့တိုင်းသွား ကစားတယ်။ ကစားရင်း စက်ရဲ့အထာကိုသိသွားပြီး သူကစားတိုင်းနိုင်လို့ ဆိုင်ရှင်က စက်ကိုလဲပစ်တယ်။ ဒါလဲသူပဲနိုင်တော့ နောက်လာမကစားဖို့ ဆိုင်ကလူမိုက်နဲ့နှင်ရတဲ့ အခြေအနေရောက်သွားတယ်။
ဂျပန်က ဟော်တည်မှာ အဲ့ဒီ အချိန် ထဲက mini bar ထားပြီး ရေခဲသေတ္တာ ထဲက စားစရာတွေ ယူရင် automatic front desk ကို bill ရောက်တယ်။ အဲ့ဒါ မြန်မာ တစ်ယောက်က bar ထဲက အရက်တွေ အားလုံးသောက်ပြစ်တာ သူ့ကို ထမ်းစင် နဲ့ပြန်သယ်ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပိုက်ဆံ တစ်ပြားမှ မကုန်ခဲ့ဘူးတဲ့။ ဘာဖြစ်လို့လဲ လို့စပ်စုကြည့်တော့ automatic front desk ကို bill ရောက်တယ်ဆိုတာ အထဲကပစ္စည်းယူလိုက်ရင် အလေး ချိန်ပေါ့သွားလို့ signal ရောက်တာ။ signal မရောက်အောင် ပစ္စည်းယူတဲ့အခါ အောက်ခြေ signal ဖြစ်မဲ့နေရာကို လက်ခလေးနဲ့ဖိပြီးအလေးချိန်တူတဲ့ ရေထဲ့ထားတဲ့ ပုလင်းကို ပြန်ထဲ့လိုက်တယ်တဲ့။ နောက်လူတော ရေတွေပဲ သောက်ရတော့မယ် ထင် တယ်။ ကျမက မြန်မာသူနာပြုတစ်ယောက်နဲ့မြန်မာပြည်ပြန်မဲ့ သူတွေကို အပြန်ပစ္စည်းတွေ လိုက်သိမ်းပေးလေ့ရှိပါတယ်။ တခါတော့ ပြန်မဲ့သူက နောက်မှာ ဘုနဲ့TV ကိုဖွင့်ပြီးအထဲမှာ နာရီတွေကို cellotape တွေနဲ့ကပ်တာတွေ့ရတယ်။ ရန်ကုန်က custom မတွေ့အောင်တဲ့။ နာရီ အလုံး ၁၀၀ လောက်တော့အသာလေး ပဲတဲ့။
တိုကျိုမှာ prepayed phone card တွေက မြိ့တွင်းရော နိုင်ငံခြား ရော ခေါ်လို့ ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြို့တွင်းက တစ်ယူနစ်ကို ရမ် ၁၀ ပဲကျပြီး မြန်မာပြည်ခေါ်ရင် ရမ် ၁၀၀ ကျတယ်။ ရမ် ထဲ့ပြီးလဲပြောလို့ရတယ်။ တစ်ချို့က ရမ် ကို အပေါက်သေးသေးလေး ဖေါက်ကြိုးထဲ့ထားပြီး၊ ဖုန်းခေါ်ပြီးရင်ကြိုးဆွဲပြီး ပိုက်ဆံပြန် ထုတ်တယ်တဲ့။ တစ်ချို့ကတော့ ဖုန်းကို ဘယ်လို လုပ်လိုက်လဲမသိဘူး၊ မြန်မာပြည်ခေါ်ရင် ရမ် ၁၀ ပဲကျတယ်။ သူတို့ပြောပြီးရင် ကျန်တဲ့ မြန်မာတွေကို အကြောင်း ကြားတယ်။ အဲ့ဒီဖုန်းရှေ့မှာ မြန်မာတွေ ဖုန်းပြောဖို့တန်းဆီနေကြတာ။ မသိတဲ့ဂျပန်တွေက ဒီပြင်ဖုန်းလဲ ရှိတယ် စောင့်ဖို့မလို ဘူးလိုပြောပြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျမတို့မြန်မာတွေက sentimental ဖြစ်တယ်။ ဒီဖုန်းနဲ့မှလို့ ပြန်ဖြေကြတယ်။
ဂျပန် telephone co က မြန်မာပြည် ခေါ်တာ များတယ် ဆိုပြီး မြန်မာပြည် အထူး phone card ထုတ်တယ်။ ဝယ်မဲ့သူ မရှိလို့ ထုတ်တာရပ်လိုက်ရတယ်။ Center က TV လိုင်း ၁၀ ခုလောက်ရှိတယ်။ အားလုံး အလကားကြည့် လို့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ လိုင်း ၂ ကတော့ ပိုက်ဆံပေးရတယ်။ အဲ့ဒါကိုလဲ မြန်မာတွေ အလကားကြည့်တဲ့ အပြင် တခြားနိုင်ငံခြားသားတွေ ကိုပါ အလကားပြကြတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်တာ လဲလို့စပ်စုကြည့်တော့။ front desk ကိုသွားတဲ့ လိုင်းကို ပင်အက်နဲ့စိုက်ထားရင် signal မသွားတော့ဘူးတဲ့။
၁၉၆၀ က world bank က မှတ်ချက် ထုတ် တယ်။ Asia မှာမြန်မာနိုင်ငံက သရံဇာတာကြွယ်ဝပြီး၊ လူတွေကလည်း IQ မြင့်လို့ အတိုးတက်ဆုံးဖြစ်မယ်တဲ့။ မှန် လား ? မ မှန်ဘူးလား ?
ဂပြနျလူမြိုး တှေ တောငျ လကျဖြား ခါလောကျ အောငျ ခြီးကြူး ရတဲ့ ရှေ မွနျမာ တို့ရဲ့ အိုငျ ကြူ မွငျ့မား ပုံမြား
ဂပြနျနိငျငံ တိုကြိုမွို.ရဲ့ JICAcenter ကအခနျး တှမှော မီး မလောငျ ရအောငျ အခနျးထဲမှာ smoke sensor တပျထား ပါ တယျ။ အခနျး ထဲ မှာ ဆေးလိပျ သောကျရငျ sensor ကအသံမွညျပါတယျ။ အနံ့ ဆကျရှိ နမေယျ ဆိုရငျ အမိုးကနရေတှေပေနျးထှကျလာပါတယျ။ အခနျးမီးကိုလဲ ပါဝါနညျးတဲ့ breaker တပျ ထားပါတယျ။ အခနျး ထဲမှာ ထမငျးဟငျးခကျြ လို့မရအောငျပါ။ breaker ကိုလဲ ဖွုတျလို.မရ အောငျ၊ ဖွုတျရငျလဲ သိအောငျရကျဆှဲ ရေးထားတဲ့ cellotape ကပျ ထားပါတယျ။ အဲ့ဒါကို အနံပွငျးတဲ့ မွနျမာဟငျးတှေ ရအောငျ ခကျြ စားကွတယျ။ အိမျသာထဲမှာ exhaut fan ရှိတာမို့ ကမုတျပျေါမှာ တငျခကျြကွပါတယျ။ မွနျမာ အင်ျဂငျြနီယာတှကေ cellotape ပျေါကစာမပကျြအောငျ breaker ပွောငျးတပျပေးပါ တယျ။
အခနျးကို နတေို့ငျး သနျ့ရှငျးရေး လာ လုပျလို့ ခကျြစားတဲ့ ဆနျ စတာတှကေို ရနျကုနျက ပါလာတဲ့ သတ်ေတာထဲမှာထဲ့ သိမျးပွီးသော့ ခတျထား ရတယျ။ အခနျး ထဲမှာလဲ ကြ မနအေောငျ သတိထား သိမျးပွီးမှ အလုပျသှားရတယျ။ အဲ့ဒီတုံးက စဉျးစားမိတာက ငါဘာ အကုသိုလျမြားလုပျခဲ့လို့ ကိုယျ့ပိုကျဆံနဲ့ ကိုယျဘာလို့ ခိုးခြောငျခိုးဝှကျစား နရေတာလဲလို့ အခုမှအဖွတှေတေ့ယျ။ ဘာ အကုသိုလျကွောငျ့မှ မဟုတျဘူး။ ပိုကျဆံမကျတဲ့ လောဘနဲ့ ကိုယျ့မွနျမာစာနဲ့ မွနျမာ မိတျဆှတှေကေိုမကျတဲ့ လောဘကွောငျ့ပဲ။
တဈကွိမျ မှာတော့ ရနျကုနျက ရောကျစ မွနျမာ ပညာ သငျနှဈဦး အခနျး ထဲမှာ ရနျကုနျက ပါလာတဲ့ အမဲသား ခွောကျတှခေကျြတာ အမိုးကရတှေလေဲ ပနျးထှကျ၊ အသံတှလေဲမွညျတာနဲ့ ဟငျးအိုးကိုငျပွီး corridor ကိုထှကျလာတယျ။ corridor ကို security က camera တှနေဲ့အမွဲကွညျ့နတော။ သူတို့ဟငျးအိုးရော rice cooker ရျောသိမျးသှားပွီး ရနျကုနျ ပွနျမှပွနျပေးတယျ။
ဂပြနျမှာ စကျနဲ့ လောငျးကစားတဲ့ (ပါခငျြကို)ဆိုတာ နရောတိုငျး လိုလိုမှာ ရှိတယျ။ ဂပြနျတှေ က တကမ်ဘာလုံး ကို သူတို့စတေနာ ၊မတ်ေတာ ရှိတယျဆိုတဲ့ နံမညျကောငျး ပွခငျြ တယျ။ ဒါကွောငျ့ JICA အထောကျအပံ့တှေ နိုငျငံ တျောတျော မြားမြားကို ပေးတယျ။ ဒါပမေဲ့သူမြားနိုငျငံတှကေို တော့သူတို့ ရဲ့နညျးပညာတှမေရစခေငျြဘူး။ သငျတနျး မှာ ဘာမှသိပျမသငျဘူး။ (Intensive care က လာတဲ့သူနာပွုဆရာမလေးက ပွောတယျ ကမြတော့ ရနျကုနျရောကျရငျ ဘာသာပွနျတဲ့အလုပျဘဲ ပွောငျးလုပျရမယျထငျတယျတဲ့။ ကမြတို့ဓါတျခှဲခနျးမှာလဲ Reagents အားလုံးဂပြနျလိုရေးထာတာ။ Distilled water နဲ့. Acetic acid ဆို အနံ့နံနံကွညျ့ရတယျ)။ သူတို့ထောကျပံ့တဲ့ပိုကျဆံသူတို့ တိုငျးပွညျမှာ ပဲသုံးပွီးပွနျစခေငျြတယျ။
ပညာတျောသငျ တဈယောကျ က ဘာမှသငျစရာ မရှိတော့ လောငျးကစား တဲ့ စကျနဲ့ နတေို့ငျးသှား ကစားတယျ။ ကစားရငျး စကျရဲ့အထာကိုသိသှားပွီး သူကစားတိုငျးနိုငျလို့ ဆိုငျရှငျက စကျကိုလဲပဈတယျ။ ဒါလဲသူပဲနိုငျတော့ နောကျလာမကစားဖို့ ဆိုငျကလူမိုကျနဲ့နှငျရတဲ့ အခွအေနရေောကျသှားတယျ။
ဂပြနျက ဟျောတညျမှာ အဲ့ဒီ အခြိနျ ထဲက mini bar ထားပွီး ရခေဲသတ်ေတာ ထဲက စားစရာတှေ ယူရငျ automatic front desk ကို bill ရောကျတယျ။ အဲ့ဒါ မွနျမာ တဈယောကျက bar ထဲက အရကျတှေ အားလုံးသောကျပွဈတာ သူ့ကို ထမျးစငျ နဲ့ပွနျသယျရတယျ။ ဒါပမေဲ့ ပိုကျဆံ တဈပွားမှ မကုနျခဲ့ဘူးတဲ့။ ဘာဖွဈလို့လဲ လို့စပျစုကွညျ့တော့ automatic front desk ကို bill ရောကျတယျဆိုတာ အထဲကပစ်စညျးယူလိုကျရငျ အလေး ခြိနျပေါ့သှားလို့ signal ရောကျတာ။ signal မရောကျအောငျ ပစ်စညျးယူတဲ့အခါ အောကျခွေ signal ဖွဈမဲ့နရောကို လကျခလေးနဲ့ဖိပွီးအလေးခြိနျတူတဲ့ ရထေဲ့ထားတဲ့ ပုလငျးကို ပွနျထဲ့လိုကျတယျတဲ့။ နောကျလူတော ရတှေပေဲ သောကျရတော့မယျ ထငျ တယျ။ ကမြက မွနျမာသူနာပွုတဈယောကျနဲ့မွနျမာပွညျပွနျမဲ့ သူတှကေို အပွနျပစ်စညျးတှေ လိုကျသိမျးပေးလရှေိ့ပါတယျ။ တခါတော့ ပွနျမဲ့သူက နောကျမှာ ဘုနဲ့TV ကိုဖှငျ့ပွီးအထဲမှာ နာရီတှကေို cellotape တှနေဲ့ကပျတာတှရေ့တယျ။ ရနျကုနျက custom မတှအေ့ောငျတဲ့။ နာရီ အလုံး ၁၀၀ လောကျတော့အသာလေး ပဲတဲ့။
တိုကြိုမှာ prepayed phone card တှကေ မွိ့တှငျးရော နိုငျငံခွား ရော ချေါလို့ ရတယျ။ ဒါပမေဲ့ မွို့တှငျးက တဈယူနဈကို ရမျ ၁၀ ပဲကပြွီး မွနျမာပွညျချေါရငျ ရမျ ၁၀၀ ကတြယျ။ ရမျ ထဲ့ပွီးလဲပွောလို့ရတယျ။ တဈခြို့က ရမျ ကို အပေါကျသေးသေးလေး ဖေါကျကွိုးထဲ့ထားပွီး၊ ဖုနျးချေါပွီးရငျကွိုးဆှဲပွီး ပိုကျဆံပွနျ ထုတျတယျတဲ့။ တဈခြို့ကတော့ ဖုနျးကို ဘယျလို လုပျလိုကျလဲမသိဘူး၊ မွနျမာပွညျချေါရငျ ရမျ ၁၀ ပဲကတြယျ။ သူတို့ပွောပွီးရငျ ကနျြတဲ့ မွနျမာတှကေို အကွောငျး ကွားတယျ။ အဲ့ဒီဖုနျးရှမှေ့ာ မွနျမာတှေ ဖုနျးပွောဖို့တနျးဆီနကွေတာ။ မသိတဲ့ဂပြနျတှကေ ဒီပွငျဖုနျးလဲ ရှိတယျ စောငျ့ဖို့မလို ဘူးလိုပွောပွတယျ။ ဒါပမေဲ့ ကမြတို့မွနျမာတှကေ sentimental ဖွဈတယျ။ ဒီဖုနျးနဲ့မှလို့ ပွနျဖွကွေတယျ။
ဂပြနျ telephone co က မွနျမာပွညျ ချေါတာ မြားတယျ ဆိုပွီး မွနျမာပွညျ အထူး phone card ထုတျတယျ။ ဝယျမဲ့သူ မရှိလို့ ထုတျတာရပျလိုကျရတယျ။ Center က TV လိုငျး ၁၀ ခုလောကျရှိတယျ။ အားလုံး အလကားကွညျ့ လို့ရတယျ။ ဒါပမေဲ့ လိုငျး ၂ ကတော့ ပိုကျဆံပေးရတယျ။ အဲ့ဒါကိုလဲ မွနျမာတှေ အလကားကွညျ့တဲ့ အပွငျ တခွားနိုငျငံခွားသားတှေ ကိုပါ အလကားပွကွတယျ။ ဘယျလိုလုပျတာ လဲလို့စပျစုကွညျ့တော့။ front desk ကိုသှားတဲ့ လိုငျးကို ပငျအကျနဲ့စိုကျထားရငျ signal မသှားတော့ဘူးတဲ့။
၁၉၆၀ က world bank က မှတျခကျြ ထုတျ တယျ။ Asia မှာမွနျမာနိုငျငံက သရံဇာတာကွှယျဝပွီး၊ လူတှကေလညျး IQ မွငျ့လို့ အတိုးတကျဆုံးဖွဈမယျတဲ့။ မှနျ လား ? မ မှနျဘူးလား ?
ဖြူဖြူ ထွေး နာမည် နဲ့ လိမ် နေကြ တာ မယုံ ပါ နဲ့” ဆို တဲ့ ဖြူဖြူ ထွေး(ရုပ်သံ)
လက်ဖက်ရည်ဆိုင် များနှင့် စားသောက် ဆိုင် ငယ်များ ချေး ငွေ စတင် လျှောက် ထားနိုင် ပြီ (ရှယ် ပေးကြ ပါအုံး …)